Dhinda inogadzira musangano - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
Jera fiber ine anodarika gumi ekudhinda. Iyo yekutsikirira tekinoroji ndiyo nzira yekuisa sandara jira simbi mune isina chinhu kana coil fomu mune yekudhinda inoumba, uye wozoimisa iyo (nekukotama, kuvhara, kuisa embossing, coining nezvimwewo) kuenzanisa saizi uye chimiro chefa, uye izvo zvinhu ipapo inochengetedza iyo chimiro nekusingaperi. Isu tinoita R&D uye tinogadzira zvigadzirwa zvine chekuita nekugadzirwa neiyi tekinoroji.
Isu tinogadzira zvikamu zvesimbi zvekutevera zvigadzirwa mune yekutsika yekudhinda musangano
-Fiber optic anchor inosunga yemufananidzo 8 tambo
-Fiber optic yakarongedzwa
-Fiber optic kuvhara
-Low voltage kuputira kuboora zvinobatanidza
-Anchor inosunga tambo yemagetsi
-Flat Kudonha waya kiramba uye kutenderera waya kiramba
-Stainless simbi bhakoro
-Fiber optic tambo inononoka kuchengetedza bracket
-Zvimwe clip, thimbles, hanger
Izvo zvakasvibirira zvekutsikisa stamping kazhinji ndeye coil yesimbi, simbi isina simbi SUS 201, SUS 304, Carbon simbi, Aluminium, Mhangura, Brass etc.
Zvese zvinhu zvinoongororwa zvinoenderana nematanho eIO 9001: 2015, uye JERA zvemukati zvinodiwa.
Nemichina iyi yekutsikisa, Jera fiber inokwanisa kutsvagisa nekugadzira zvigadzirwa zvitsva uye kuita zvimwe zvinodiwa nevatengi zvigadzirwa zvinoenderana nematanho edu azvino. Inoita Jera faibha ine yakafara chigadzirwa renji kuti igutse vatengi zvakasiyana zvinodiwa. Uye zvigadzirwa zveJERA zvinova zvinokwikwidza mumisika
Nekushandisa iyi yekugadzira yekudhinda tekinoroji, isu tinogona kuburitsa iyo simbi zvikamu toga. Iyo inochengetedza mutengo uye inoita iyo yeyuniti mutengo wezvigadzirwa zvakanyanya kukwikwidza, uye isu tinogona nyore kudzora mhando isu pachedu.